Ezigbo Earthwa - Geofumadas
Ụwa 3D nke oma. Microsoft Mebere Ụwa Map ndị dị ndụ
Google Maps mma arụmọrụ
Google eweputala ụdị beta ọhụụ nke ihe nchọgharị map ya, yana ngwaọrụ ndị na-atọ ụtọ. Na nke a, iji rụọ ọrụ ya ị ga-eme njikọ njikọ Ọhụrụ! n'aka nri nke akara ule ule nyocha, ma mee ka nhọrọ ahụ rụọ ọrụ. Dọ aka na ntị doro anya, ha bụ naanị ule a na-eme, yabụ ...
Google Earth / Maps, innovations, virtual Earth
Allallsoft, budata map si Google, Yahoo, Bing na OSM
Allallsoft nwere ọtụtụ ngwa na-enyere aka ibudata onyonyo sitere na ọrụ maapụ kachasị ama n'ịntanetị. Mmemme ndị a bụ ụdị nke Google Image Donwnloader, nke m kwuru maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ gara aga na nke nwa oge ịkwụsị ọrụ. Ihe di iche n'etiti mmemme ndia ...
Virtual Earth, melite oyiyi Eprel 2009
Virtual Earth na-emelite na ọsọ ọsọ karịa Google Earth, naanị na Machị ha gbagoro 21 TB na Eprel ha ebugola ọtụtụ data data, ọtụtụ n'ime ha sitere na mpaghara Hispanic anyị. N'oge a, ọ nwere ike ijide gị n'oge na-adịghị anya, n'ihi na nke ahụ bụ otu n'ime ...
Jikọọ Manifold na Open Street Map
Oge ụfọdụ gara aga m na-agwa gị na Manifold nwere ike jikọọ na Google, Yahoo na Virtual Earth. Ugbu a njikọta njikọta na Open Street Maps (OSM) apụtala, nke ụzọ mepụtara na C # site na onye ọrụ ọgbakọ akpọrọ Jkelly. Akụkọ a pụtara n'izu a na ọgbakọ Manifold, ebe ...
Virtual Earth na-emelite 21 TB nke ihe oyiyi
Nke ahụ bụ oke ọnụọgụ data nke Virtual Earth tinyegoro na ụbọchị Machị bụ, na mba ndị Hispanic gburugburu ahapụbeghị; Mexico na Brazil abụwo ndị kachasị uru. Aha ndị ahụ na Bekee, dịka a na-ekwuwapụta ya na Virtual Earth. Central na South America ...
Geomatics, ndị ọzọ novelties
Ewezuga magazin nke Geoinformatics bipụtara ụbọchị ole na ole gara aga, enwere ụfọdụ isiokwu ndị ọzọ bipụtara na ọnwa a na ọnụ ụzọ ha bara uru ịkekọrịta. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime mgbasa ozi ndị a yiri ka ha na-akwado ha, ha na-atụnye ụtụ maka ọganihu na teknụzụ na-enwe na nke na-edozi ụda ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, innovations, virtual Earth
Virtual Earth na-emelite ihe oyiyi nke Spain
Oge ikpeazụ anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obodo ndị na-asụ Spanish nke VirtualEarth emelitere, na nke a na Ọktọba ekwuputala mmelite ọzọ, nke site n'ụzọ na-agbakwụnye ọnụ ọgụgụ ịkwa emo nke 41.07 Terabits Mana oge a naanị Spain na-ewere ihe nrite ahụ. Obodo ndị ahụ bụ: Barcelona Malaga Manresa Mijas Oviedo Sagunto ...
Jikọọ Ụwa Mepụtara na ArcGIS 9.3
Ọ bụrụ na Microsoft chọrọ iji ihe dị egwu banyere ụwa geospatial ma nweta ala site na Google, ọ ga-esonye na ụlọ ọrụ ngwanrọ pụrụ iche ma mee ka ọ bụrụ "ọkachamara". Nke a bụ ihe mere n'ihe banyere mwepụta nke TrueSpace iji kwaa Sketchup emo!, Ugbu a na nkwekọrịta ya na ESRI na-achọ iru ndị ọrụ nke ...
Microsoft na-akwado EziSpace
Enwere m olileanya ezigbo mgbaghara maka okwu iyi nke nwere ike iwe iwe na mba ụfọdụ, mana ịchụpụ bụ mkpofu nke Microsoft na-eji ngwa ọrụ dị ike nke ọ nwetara ọnwa 5 gara aga site na Caligari. Kedu ihe kpatara na ọ dị ka Microsoft shits na-ejegharị na TrueSpace? Ọfọn, n'ihi na ọ na-egosi ebumnuche dị mfe ịsọ mpi megide ya ...
MapBuilder surrenders ... ọzọ
Ọ na-ewute ịhụ ọrụ ndị na-adọrọ mmasị na-adọka uwe ha ma kweta na ha na-ala ezumike nká ... naanị ụbọchị ole na ole gara aga, anyị kwuru banyere adịghị ike nke ọrụ ndị ejikọtaghị na atụmatụ azụmaahịa na-eme ihe ike na-enye nkwado. Nke a abụghị eziokwu na MapBuilder, ọrụ a mụrụ na Disemba 2003, nwere ezigbo nsonaazụ ...
Virtual Earth na-emelite onyonyo, tinyere mba ndị Hispanic
Mmelite nke ihe onyonyo dị elu nke Virtual Earth ọnwa nke ọnwa Julaị na-aga nke ọma, ọ dịla anya kemgbe anyị ahụla ọtụtụ ụdị emelitere, gụnyere mba ndị na-asụ Spanish. Ọ dị ka iwe ya ịchọta data arụ ọrụ maka ya ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ya ka ewere ya na UltraCam, ...
Jụọ kaadị na Microsoft
N’oge gara aga, anyị na - ekwu maka ụzọ isii dị iche iche maka ọrụ maapụ ọnlaịnụ; Ọfọn, ị ga-ewepu otu n'ime ha ma tinye onye ọzọ n'ihe egwu nke mkpochapụ. Bịa jụọ ajụjụ maapụ kpebiri ịhapụ, ugbu a ọ na-egosi Virtual Earth na ibe ya, nke na-echeghị na Microsoft kpebikwara ịzụta opekata mpe ...
Google vrs. Ikike, agha ahụ dị njọ
Agha Google na Microsoft na-akwado agha ha maka balloons mebere, ha abụọ emeghewo atụmatụ yiri nke ahụ, site n'ime ka data ha dị maka ndị na-ahụ maka ịntanetị iji melite n'efu. N'afọ gara aga, Google haziri ụdị ka ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwee ike mejupụta ya, na-eme ka a mara ihe ha nwere ...
Jikọọ Manifold na ọrụ OGC
Otu n'ime ọrụ kachasị mma m hụrụ na Manifold GIS bụ arụmọrụ iji jikọọ na data, ma site na Google Earth, Virtual Earth, map Mahoo yana ọrụ WMS n'okpuru ụkpụrụ OGC. Ka anyị hụ otu esi eme ya. N'okwu a, achọrọ m ijikọ mpaghara Calle Valdemaría, dị ka e gosiri na ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, manifold GIS, virtual Earth
Ụfọdụ geofumadas dị mkpirikpi
Vexcel, ndị enyemaka nke Microsoft, na-enye data Virtual Earth na-anọghị n'ịntanetị. Ihe ngwọta a na-achota ịnye data ederede 3D na onyonyo nke mma karịa ndị a hụrụ na ntanetị ma nwee ike ịdị na ntanetị n'ịntanetị, na-ahọrọ obodo, steeti, mpaghara na ọbụna mkpuchi ụwa niile. A mụrụ Google Geo ...
Cartografia, Google Earth / Maps, virtual Earth
Lelee mesh lat / ogologo na Mebere Ụwa
Enwere ike ịlele Virtual Earth na nsụgharị yiri Google Earth, ọ bụ ezie na ọ bụghị na desktọọpụ kama na ntanetị, na-arụ ọrụ site na ịwụnye mgbakwunye 3D ... ọ bụ ntakịrị ihe ịdọrọ n'ihi na ị ga-enye ikikere ngwa mgbakwunye mana ọ na-arụ ọrụ n'ikpeazụ. Ugbu a, ha agbakwunyela faịlụ kml nke na-enye gị ohere ịhụ ohere na ịdị ogologo na nke ọ bụla na ...